Umatshini wokugcwalisa, Umatshini wokuPhawula, umatshini wokuCoca-uLianteng
Sinabasebenzi abaqeqeshiweyo abaliqela, ukuqinisekisa ukuba yonke imiba yemveliso
Sithembisa ngokuqinisekileyo ukuba nakuphi na ukusilela kweemveliso zethu kuya kuba simahla kwisithuba seminyaka eli-10
Sikhetha izinto ezikumgangatho ophezulu, iimveliso ngeenkqubo ezininzi, ukuvavanywa okuphindiweyo
I-Wenzhou Lianteng Packaging Machinery Co.Ltd. izibophelele kuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zoomatshini bokupakisha, ingcali yasekhaya ebandakanyeka kukutya, amayeza kunye nezinye izinto ezizenzekelayo zokupakisha iingcingo kumashishini aphambili. U-Lian Teng ukubonelela uyilo, ukwenziwa, ufakelo, ukugunyazisa, uqeqesho, inkonzo yasemva kwentengiso, enje ngenkonzo yoololiwe. I-Lian teng ngoku iphuhlise uyilo, imveliso, ukuthengisa, uphando kunye nophuhliso kwelinye lamashishini aphuculo lwangoku.
Umgca ogcweleyo wokugcwalisa ulwelo ...
G2WG intloko kabini Cola gcwalisa ...
G1WY Intloko enye yokugcwalisa ulwelo ...
G1WG Intloko enye Cola ukuzaliswa ...
A03 Hand uxinzelelo ukugcwaliswa m ...
LT-60 umatshini wokulebhelisha eFlat
LT-50D ngeenxa ibhotile labelin ...
LT-50 ujikeleziso lwebhotile ...
Yintoni umatshini wokugcwalisa Umatshini wokugcwalisa ikakhulu udidi oluncinci lweemveliso kumatshini wokupakisha. Ukusuka kwimbono yokupakishwa kwezinto, inokwahlulahlulwa ibe kukuzaliswa kwamanzi ...
Eyona mveliso ithengiswa kakhulu ngo-2020 - umatshini wokugcwalisa umatshini wokupakisha weLianteng uzibophelele kuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zoomatshini bokupakisha, yinkqubo yasekhaya ...
I-Lianteng iqeqesha inkcubeko yenkampani kubasebenzi ukusukela oko yasekwa ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, oomatshini bokupakisha beLianteng abakhange bajolise kuphela kuphuhliso nakwimveliso yeepakeji ezahlukeneyo ...